शिक्षित र बुद्धिमान प्रमाणपत्रहरुले होइन, चेतना र ब्यबहारले प्रमाणित गर्दछ ! - Lekhapadhi विचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २० जेष्ठ २०७८, बिहीबार १२:४३ मा प्रकाशित
शिक्षाले व्यक्तिलाई विवेकी बन्न मद्दत गर्दछ । त्यसैले त ‘शिक्षा’ मानिसको तेस्रो आँखा मानिन्छ । यसले व्यक्तिमा सही र गलतको ज्ञात गराई सत्मार्गमा लाग्न प्रेरित गरेको हुन्छ ।
समाजमा भैरहेका असमान व्यवहार र अन्याय अत्याचार, निरंकुशता, दमन, विभेदको विरोध गरी समाजमा समानताको वातावरण सिर्जना गराउनतर्फ शिक्षा केन्द्रित हुनुपदर्छ । व्यक्ति र समाज तथा सामाजिक चाहना, अन्तर्राष्ट्रीय माग, ज्ञान विज्ञान एवम् प्रविधि र परिवेशका आधारमा शिक्षामा पनि क्रमिक सुधार हुँदै गएको हुन्छ । शिक्षामा युग सुहाउँदो परिवर्तन आवश्यक पनि हुन्छ र त्यो परिवर्तनलाई सिकारु वा शिक्षार्थीले पनि आफ्नो व्यवहारमा प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
गुणी, लगनशील, सहृदयी साथै कुनै पनि कार्यमा निपुणता प्राप्त गर्न सक्षम योग्य र चरित्रवान् व्यक्तिको निर्माण शिक्षाले नै गर्दछ ।
सद्चरित्र र निष्ठावान,इमान्दार व्यक्तिको अभावमा समाज सभ्य उन्नत बन्न सक्दैन । देशमा व्याप्त हत्या, हिंसा, लुटपाट, विभेद, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरुलाई निरुत्साहित र निर्मूल गर्नका लागि देशभक्त र इमान्दार नागरिकको खाँचो छ । गुणी, लगनशील, सहृदयी साथै कुनै पनि कार्यमा निपुणता प्राप्त गर्न सक्षम योग्य र चरित्रवान् व्यक्तिको निर्माण शिक्षाले नै गर्दछ । असल नैतिक चरित्रवान् व्यक्ति निर्माण गर्नु शिक्षाको मूल उद्देश्य हो तर यसो हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले धेरै मानिसहरु शिक्षित हुँदै गए पनि उपयुक्त चरित्र निर्माण हुन नसक्दा समाजमा अनेकौं समस्या र विकृतिहरुको सिर्जना हुँदै गएको देखिन्छ । स्वयम् पढेलेखेकाहरु नै व्यभिचार, विभेद, असमानतापूर्ण व्यवहार गर्न थालेपछि अरुले के गर्ने??
पक्कै पनि शिक्षितहरु नै भित्रैदेखि परिवर्तन नभएसम्म समाज अनि राष्ट्र परिवर्तन हुन सक्दैन । हामी ति नराम्रा कुराहरु गर्नुहुँदैन भनेर किताबहरुमा पढ्छौं घोक्छौं तर स्वयम् शिक्षित भनिएकाहरुले समेत त्यसको विरोध गरेर सही मार्गमा हिंड्न सक्दैनौं । “पढेलेखेका मानिस र दूरदराजमा मेलापातमा मात्रै रुमलिएर अध्ययनको अवसर नपाएका मानिसहरुका व्यवहारमा जबसम्म फरकपन पाइँदैन तबसम्म शिक्षाको औचित्य रहँदैन ।
शिक्षित मानिसहरुको व्यवहारमा नम्रता, स्पष्टता, मानवता, सहयोगी भावनाको विकास हुन आवश्यक छ ।
“शिक्षित मानिसहरुको व्यवहारमा नम्रता, स्पष्टता, मानवता, सहयोगी भावनाको विकास हुन आवश्यक छ । स्वयम् शिक्षित र सचेत वर्ग कुलत, कुसंस्कार, अन्धविश्वास, विभेदको पक्षमा लाग्नु भनेको त लाजमर्दो कुरा हो । यसलाई आफुले त्याग्न र अरुलाई पनि त्याग्न लगाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु शिक्षित वर्गको कर्तव्य हो । त्यो कर्तव्यबाट सचेत वर्ग विमुख हुनु हुँदैन । शिक्षित वर्ग त कर्तव्यपरायण र परिवर्तनको संवाहक बन्न सक्नुपर्दछ । राष्ट्रको आमूल परिवर्तन तब मात्र सम्भव हुन्छ जब सिङ्गो राष्ट्रका जनताहरु शिक्षित हुन्छन् अनि प्राप्त गरेको ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्दछन् ।
हेमा सेन ठकुरी
Global Magazine of News & Opinion